कति उचाइको निम्ति कति तौल आवश्यक - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ कति उचाइको निम्ति कति तौल आवश्यक
कति उचाइको निम्ति कति तौल आवश्यक
हेल्थ आवाज शनिबार, २०७६ साउन ११ गते, १६:१२ मा प्रकाशित
प्रायःजसो धेरै आवश्यकभन्दा बढी तौल भयो भनेर चिन्तित भइरहेका हुन्छन् । तर, के यसबारेमा हामीलाई सही ज्ञान छ, हाइटअनुसार कति तौल आवश्यक पर्छ ? हाइटअनुसार कति तौल उचित हो त ?
धेरै मानिस जान्न इच्छुक भएका हुन्छन्, म कति केजी हुनुपर्छ ? मेरो तौल कतिसम्म उचित हो ? तर, कुनै पनि विशेष समूहका आधारमा यो ग्रुपको तौल यति हुनुपर्छ, भन्ने त्यस्तो कुनै नियम छैन । यो ब्यक्तिको उमेर, लिंग, हाइट तथा उसको जिउको आकारमा निर्भर रहन्छ ।
आवश्यकताभन्दा बढी तौल भएको खण्डमा ब्यक्तिलाई उच्च रक्तचाप र चिनी रोगजस्ता सानादेखि ठूला रोगहरुसम्म लाग्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तसर्थ, यसबाट बच्नको निम्ति हामी आफ्नो शरीरको बढ्दै तथा घट्दै गएको तौलबारे बेलैमा सजग हुनुपर्दछ ।
त्यसो भए कति हाइट भएका ब्यक्तिको कत्ति तौल आवश्यक छ त ?
उचाइअनुरुप आवश्यक तौल
उचाइ तथा तौलको आधारमा मात्र कत्तिको स्वस्थ्य छ भनी निर्धारण गर्न सकिदैन् । यसअन्तर्गत ब्यक्तिको लिंग, खानपान, दैनिकी, कार्य, कसरत, रहनसहन तथा वशांणुगत कुराहरुले पनि प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् ।
तसर्थ, यसलाई थुप्रै कुराहरुले प्रभाव पार्ने हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ्य बन्नको निमित्त हरेकले आफ्नो तौल सँगसँगै अन्य कुराहरु जस्तैः खानपान, कसरत, कार्य, रहनसहनजस्ता विषयहरुमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहन्छ ।